Shiinaha YASKAWA robot alxanka laser MOTOMAN-AR900 warshad iyo soo saarayaasha | Jiesheng
Robot Alxanka Laser Sharax
Marka la barbardhigo moodooyinka hore, ayaa Taxanaha MOTOMAN-AR ee Robotyada alxanka Yaskawa waxay hagaajisay xorriyadda dhaqdhaqaaqa, isu-koobnaanta waxayna yareeysay cabirka aaladda. Robotyada waxaa lagu dhejin karaa cufnaan sare, taas oo u badbaadineysa meel macaamiisha ah qalabka wax soo saarka.
Qalabka shaqada yar robot alxanka laser MOTOMAN-AR900, 6-dhidibka taagan multi-wadajir ah nooca, xamuulka ugu badan ee la bixiyo 7Kg, dheereynta ugu sareysa ee jiifka ah 927mm, oo ku habboon golaha xakamaynta YRC1000, adeegsiga waxaa ka mid ah alxanka qaansada, farsamaynta leysarka, iyo maaraynta. Waxay leedahay xasillooni sare waxayna ku habboon tahay kuwa badan Noocan jawiga shaqada ah, kharash-ku-ool ah, ayaa ah doorashada koowaad ee shirkado badan MOTOMAN Yaskawa robot.
Ku robot alxanka laser MOTOMAN-AR900 lagu qalabeyn karaa noocyo kala duwan oo ah qoryaha alxanka servo iyo dareemayaal. Iyada oo loo marayo ficil-xawaare sare leh, waxay yareyn kartaa garaaca. Waxay qaadataa naqshad yareynaysa faragelinta u dhexeysa cududda iyo qalabka durugsan, kuna habboonqaybo yar yar alxanka.
Faahfaahinta Farsamada ee Robot Alxanka Laser :
34Kg 1.0kVA 375 ° / seken 315 ° / seken
410 ° / seken 550 ° / seken 550 ° / seken 1000 ° / seken
Cusbooneysiinta tan robot alxanka cusub qaab dhismeedka, waxqabadka iyo shaqadu waxay hagaajineysaa xorriyadda dhaqdhaqaaqa iyo isu-duubnaanta jirka. Waxay garwaaqsatay fududaynta nidaamka rakibidda iyo hagaajinta wax-soo-saarka wax-soo-saarka. Intaa waxaa sii dheer, shirkaddu waa shirkad awood u leh inay bixiso adeegga-iibinta kadib ee shirkadda Yaskawa, dayactirka qalabka ayaa la damaanad qaaday
Hore: YASKAWA AUTOMOBIL buufinta robot MPX1150
Xiga: YASKAWA robot alxanka otomaatig ah AR1440
Robotka Gacanta otomaatiga ah, Nidaamyada Maaraynta Qalabka Robotka, Aaladda otomaatiga ah ee Robot, Warshadaha Qabashada Warshadaha Gacanta, 6 Axis Qabashada Robot, Qabashada Gacanta Robot,